Kedu ụdị mkpụrụ dị elu na potassium? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Ndi pistachios di na potassium - edeputara ajuju na azịza
Ndi pistachios di na potassium - edeputara ajuju na azịza
Kedu ụdị mkpụrụ dị elu na potassium?
Gbalịa almọnd, Brazilakụ, ego, egoekere, aekere peekere,pecans, osisi ugu, mkpụrụ sunflower, na walnuts.
Ntuziaka maka aelu-potassiumnri
Rie mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri n'ụdị ha dị ọhụrụ ma ọ bụ nke kachasị amị.
Lelee ederede maka ihe ndị nwerepotassium.
Gbalịa itinye nnu.
Potassium dị mkpa maka ahụike na ọkpụkpụ. Ọ dịkwa ezigbo mkpa maka ndị nwere ọbara mgbali elu dịka ọ nwere ike belata ohere nke ọrịa obi na ọrịa strok. Ebe ọ bụ na ahụ enweghị ike ịmịpụta potassium ugbu a, ọ ga-abịa site na nri.
N'isiokwu a, m lere anya isii n'ime isi mmalite nri kacha mma maka potassium. Number otu, agwa agwa. Agwa na lentil bụcha ụzọ dị ukwuu nke potassium.
Ugbu a, agwa ọcha bụ otu n'ime ihe kachasị mma, nke nwere milligrams 829 nke potassium na otu iko, nke dịka 179 gram, nke bụ 18% nke ụgwọ a na-atụ aro kwa ụbọchị. Nnukwu akụkọ a, nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ 250,000 bịara, chọpụtara na oriri potassium mụbara site na ihe dị ka milligrams 1,600 kwa ụbọchị ma ọ bụ ihe dịka 35% nke RDI na-ebelata ohere nke ọrịa strok site na 21%. Yabụ iko agwa zuru.
Ọzọkwa, otu iko nke agwa ọcha na-enye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ gram 19 nke eriri, nke bụ ihe dị ka 75% nke nri eriri gị. Ọ bụkwa ezigbo isi iyi nke protein sitere na osisi. Mgbe ahụ, enwere eziokwu na ha dị ọnụ ala ịzụta.
N’ụzọ bụ isi, ị na-erikwu agwa. Number abụọ, poteto na ụtọ nduku. Mgbe niile na-ewere dị ka ihe ndị kasị edozi ahụ oriri, ma ha bụ ndị a n'ezie ọgaranya isi iyi nke potassium.
Nnukwu poteto eghere eghe, ihe dị ka ounces 10 ma ọ bụ gram 300, na-enye gị 34% nke RDI. Ugbu a, imirikiti potassium ndị dị na nduku dị na pulp, mana ihe dịka otu ụzọ n'ụzọ atọ dị na bee, nke mere na ị na-eri poteto na-adịghị edozi enye gị ọtụtụ n'ime potassium. Potatoestọ nduku, ọzọ starchy tuber nwekwara akwanyere ùgwù isi iyi nke potassium.
Otu nnukwu nduku na-atọ ụtọ nke dị ihe dị ka ounces 6, ma ọ bụ gram 200, na-enye 18% nke RDI. Poteto na poteto dị ụtọ juputara na vitamin C, vitamin A, vitamin B6, na manganese. Onye obula kwesiri iri otutu nduku.
Number atọ, unere. Unere maara na ọ bụ ezigbo ihe na-enye protein. N’ezie, unere nwere obere ihe nwere ihe karịrị 400 mg nke potassium, nke bụ ihe dịka 12% nke onyinye a na-atụ aro kwa ụbọchị, bụkwa ụzọ dị mfe ma na-edozi ahụ iji mee ka nri potassium gị na-aga.
Ọ bụ ya mere m ji agba mmadụ niile ume ka ha rie unere kwa ụbọchị. Ma mba, nnukwu banana akwụghị m ụgwọ maka ya. Nọmba anọ, beets.
Beets bụ akwụkwọ nri na-acha uhie uhie miri emi nke nwere uto ụtọ. Otu iko, ma ọ bụ ihe dị ka gram 170, beets nwere ihe dị ka milligram 500 nke potassium, ma ọ bụ 11% nke onyinye a na-atụ aro kwa ụbọchị. Ha dịkwa elu na folic acid na manganese.
Ọzọkwa, ụcha nke na-enye ha agba mara mma na-eme dị ka antioxidant nke nwere ike inye aka ịlụ ọgụ na mbibi oxidative na mbufụt. Beets nwekwara ọgaranya nitrates, nke na mgbakwunye na potassium nwere ike inyere aka melite ọrụ arịa ọbara, ọbara mgbali elu na mmega ahụ Nọmba ise, akwụkwọ nri. Akwụkwọ nri bụ ezigbo ihe oriri.
Otu iko ma ọ bụ gram 180 nke akwụkwọ nri esiri esi na-enye 18% nke RDI maka potassium, na-eme ka ọ bụrụ nhọrọ dị ukwuu maka ndị na-achọ ịbawanye nri ha. Ọ na-enyekwa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu anọ RDI maka vitamin A, 10 ugboro RDI maka vitamin K, yana ihe dịka 30% nke RDI maka calcium na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 90% nke RDI maka manganese. Ugbu a, nri ndị a dị mkpa maka metabolism, ọhụhụ ụzọ, ahụike ọkpụkpụ, na usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ.
Ma n'ezie, akwụkwọ nri akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ dị ka akwụkwọ nri, dị ka chard Switzerland, dị oke antioxidants nke nwere ike inye aka ịlụ ọgụ na mmebi sel na usoro ịka nká. Number isii, parsnips. Parsnips bụ akwukwo nri na-acha ọcha nke yiri karọt.
Otu iko parsnips na-enye ihe dịka milligrams 570 nke potassium, ma ọ bụ ihe dịka 12% nke onyinye a na-atụ aro kwa ụbọchị, bụkwa ezigbo isi iyi nke vitamin C na folic acid, nke dị mkpa maka ahụike na anụ ahụ, nkewa sel, na mgbochi nke ntụpọ ọmụmụ. . Nke bụ eziokwu bụ na naanị 3% dị ntakịrị nke ndị America na-eri nri potassium ụbọchị a. Ou nwere ike ịbụ n'etiti ndị ọzọ 97% na-anaghị emezu ihe ndị achọrọ, mgbe ahụ nri isii m kwuru n'isiokwu a bụ ezigbo ebe bido.
Daalụ maka ikiri. Jide n'aka na ị nyere edemede a isi mkpịsị aka ma ọ bụrụ na ịchọta na ọ bụ ihe mmụta. Echefukwala ịdenye aha na channel YouTube Health Nutrition's Healthline site na ịpị bọtịnụ ntinye aha na-acha ọbara ọbara n'okpuru isiokwu a. (egwu egwu)
Kedu mkpụrụ dị ntakịrị na potassium?
Macadamiaakụna pecans bụ na ala nke ndepụta makapotassiumọdịnaya. 1-ounce serving nke macadamiaakụnwere 104 milligram nkepotassium, mgbe otu akụkụ pecansnwere116 milligram. Ofkpụrụ abụọ a na-anọchite anya 2 pasent nke akwadoro kwa ụbọchịoririmakapotassium.
Mkpụrụ bụ ebe dị egwu nke abụba siri ike, eriri, na protein. Ọtụtụ nnyocha egosiwo na ha nwere ọtụtụ uru ahụike, ọkachasị na mbenata ohere nke ọrịa obi. Yabụ n’isiokwu a, a na m ele ise n’ime mkpụrụ osisi kachasị mma ị nwere ike iri, mkpụrụ osisi Brazil.
A na-ekwu na mkpụrụ osisi Brazil si n'osisi dị na Amazon wee bụrụ isi iyi nke selenium bara ụba. N'ezie, otu ounce ma ọ bụ gram 30 nke mkpụrụ Brazil na-enye gị ihe karịrị 100 pasent nke oriri a tụrụ aro, ma ọ bụ RDI maka mineral selenium. Nke a bụ ugbu a na mgbakwunye na 26 pasent nke RDI maka magnesium, nke bụ ihe dị mkpa ịnweta maka ahụike obi.
Ugbu a selenium erughi bụ obere na-emekarị na-eme na ụfọdụ ọrịa na-ekwu. Dịka ọmụmaatụ, n'ọmụmụ ihe a, ndị ọrịa na-arịa hemodialysis maka ọrịa akụrụ nwere ụkọ selenium. Ndị ọrịa a riri naanị otu mkpụrụ osisi Brazil kwa ụbọchị maka ọnwa atọ, ọkwa selenium ha n'ọbara ha edozi na mkpụrụ ahụ nwere mmetụta antioxidant n'ọbara ha ma ọ bụ.
Ugbu a ọ na-atọ ụtọ mgbe nri ụfọdụ bara ọgaranya na nri ụfọdụ nke na ọ bụ otu mgbakwunye mgbakwunye nri si arụ ọrụ. Mkpụrụ osisi Brazil nwekwara ike belata mbufụt na ndị ọrịa hemodialysis na ndị ahụike. A na-egosiputa ntinye nke selenium maka ọnọdụ ndị ọzọ dị ka Hashimoto's hyperthyroidism.
N'ezie, gland anyị thyroid nwere ọdịnaya selenium kachasị elu na gram nke akụkụ anyị ọ bụla. Nọmba abụọ, walnuts. Walnuts bu ezigbo uzo nke omega-3 fatty acid, alpha-linolenic acid.
Ọtụtụ nnukwu ọmụmụ chọpụtara na iri walnuts budata belata mkpokọta cholesterol na LDL cholesterol, ebe ọ na-abawanye ezigbo cholesterol HDL. Nke a nwere ike ịbụ n'ihi ọdịnaya alpha-linolenic dị elu na nri ndị ọzọ. Walnuts nwekwara ike ime ka ihe ndị ọzọ metụtara ahụike obi dịkwuo mma, gụnyere nsị usoro, ọbara mgbali, na ọbara na-asọkarị site na usoro ọbara.
N'ụzọ na-akpali mmasị, otu nnyocha nke ụmụ akwụkwọ kọleji chọpụtara na ukpa oriri na-abawanye ogo nke ihe ọmụma a maara dị ka echiche na-enweghị isi, na-atụ aro na ịkpa ukpa nwere ike ịba uru na ụbụrụ, mana nke a bụ ịkọ nkọ. Number atọ, almọnd. Almọnd nwere ọtụtụ nri bara uru, ọkachasị vitamin E, nke bụ antioxidant, yana magnesium ịnweta.
Nnyocha na-egosi na almọnd ndị a na-eri dị ka akụkụ nke nri kalori dị ala nwere ike inyere ndị buru oke ibu ma ọ bụ ndị buru ibu aka ịdalata ma belata ọbara mgbali. O yikwara ka ha bara uru karịsịa maka ndị na-arịa ọrịa shuga, nke na-eme ka shuga dị n'ọbara na-abawanye, bụ nke ndị na-arịa ọrịa shuga na-eme mgbe ha richara nri ruo pacenti iri atọ. Agbanyeghị, enweghị oke mbelata na ndị ahụike.
Egosiri ha iji belata mbufụt na ndị nwere ụdị ọrịa shuga 2, nke m ga-enweta n'otu oge. Ma almọnd a roara n'ọkụ na-edozi ahụ, ọ bụ ezie na ndị sitere n'okike nwere vitamin E karịa na ha, mana soro naanị ihe ọ bụla masịrị gị. Nọmba anọ, cashews.
lazer okpu agha mips
Cashews bu oke ozo di nma karie karie nke magnesium dika almọnd. N'ezie, ha bụ mkpụrụ osisi Cashew na almọnd, tinyere akwụkwọ nri, bụ otu n'ime isi mmalite magnesium na nri mmadụ. Ọkara otu iko ofe inine nwere milligram 78, mgbe ahụ ounce ma ọ bụ gram 30 nke mkpụrụ ego ma ọ bụ almọnd nwere ihe dị ka gram 74 na 80.
Eziokwu ahụ bụ na mkpụrụ ego na almọnd na-adaba ma dị ụtọ bụ naanị ego. Magnesium bụ ihe dị mkpa ịnweta nke metụtara ọtụtụ narị usoro ahụ, gụnyere shuga shuga. Usoro nke ime ihe ya edoghị anya, mana ogo magnesium dị ala jikọtara ya na njikwa adịghị mma nke ụdị 1 na ụdị ọrịa shuga 2.
Tụkwasị na nke ahụ, ọmụmụ ihe ọmụmụ egosiwo na idozi ogo nke magnesium dị ala na-eme ka nzaghachi insulin dịkwuo mma ma belata ogo shuga dị n'ọbara. Yabụ ọ bụrụ na ị nwere ọrịa shuga, ọ ga-abụ ihe ezi uche dị na ya itinye obere ego ma ọ bụ almọnd na nri gị kwa ụbọchị. Number ise, obere ego.
Ugbu a ka m ga-ebido sị na ahụekere abụghị n'ezie mkpụrụ. Ha adighi eto n’elu osisi, kama obu nkpuru ahihia. Otú ọ dị, a na-echekarị ha dị ka mkpụrụ ma nwee profaịlụ na-edozi ahụ na uru ahụike na mkpụrụ, mana maka obere ego.
Nnyocha e mere karịrị otu narị puku mmadụ na iri puku abụọ gosiri na ọnụọgụ ahụekere dị elu na-emetụta ọnụ ọgụgụ ọnwụ dị ala. N'ụzọ na-akpali mmasị, ọnụọgụ ụkwara ume ọkụ na ọrịa nfụkasị nwere ike ịdị ntakịrị na ụmụaka a mụrụ nye nne ndị na-eri ahụekere otu ugboro ma ọ bụ karịa n'izu n'oge afọ ime, ọ nwekwara ike ịba uru karịa iri nri. Ugbu a, achọrọ m ime ka o doo anya na bọta ahụekere nwere mmanụ buru ibu na ihe ndị ọzọ.
N'ihi ya, ọ kacha mma ịhọrọ ahụekere ahụekere nwere ahụekere kachasị elu ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka ọ dị mma. Nke ahụ na-abụkarị pasent 90 tinyere ahụekere nke siri ike, dịkwa mma, a dọrọ gị aka ná ntị. Marakwa na ọtụtụ ahụekere na-abụkarị nnu ma ọ bụ na-esi ísì ụtọ nke ukwuu, nke nwere ike iwepụ ahụike metụtara ha, yabụ gbalịa ịhọrọ obere ahụekere na-enweghị ntụ, na nke na-enweghị ụtọ mgbe ọ bụla o kwere mee.
O doro anya na mkpụrụ na ahụekere bụ ụfọdụ n'ime nri kachasị mma ị nwere ike iri. Enweghi ihe ndi ozo. Na nwute, azụmaahịa ahuekere anaghị agụta ọnụ.
Ọ bụrụ n’ịchọtara isiokwu a bara uru, ọ ga-amasị anyị ịnwe mkpịsị aka aka ma denye aha na YouTube Nutrition Authority Nutrition site na ịpị nnukwu bọtịnụ ọbara ọbara n'okpuru pịa isiokwu ahụ na otu ị ga - esi hụ akwụkwọ ọhụrụ anyị niile ozugbo ewepụtara ha. . (egwu dị egwu)
mmega osisi chopper
Kọfị dị elu na potassium?
Atọ na iko anọ nkekọfịa na-atụle ụbọchịnnukwu potassiumma nwee ike bulie gipotassiumetoju. Gbakwunye creamers ma ọ bụ mmiri ara ehi nwere ike ibuli gịkọfị si potassiumọdịnaya.25bọchị 25 2021
Ego ole ka sodium dị na pistachio a roara n'ọkụ?
Otú ọ dị, pistachios a roara n'ọkụ dị nnọọ elu na ọkwa sodium (ihe dị ka 121 mg nke sodium kwa ounce) n'ihi na a na-etinye ha nnu (nke bụ isi ihe sodium).
Kedu ụdị mkpụrụ nwere ọtụtụ potassium?
Mkpụrụ osisi potassium dị elu na mkpụrụ osisi gụnyere mmiri aki oyibo, mkpụrụ osisi hemp, mkpụrụ sunflower, pistachios, mkpụrụ squash, mkpụrụ flax, hazelnuts, almọnd, mkpụrụ osisi Brazil, na mkpụrụ osisi mmiri. Ihe dị ugbu a (% DV) maka potassium bụ 4700mg, na nso nso a site na 3500mg site na FDA.
Kedu ihe na-eme ka pistachio bụrụ mkpụrụ nke kacha mma iri?
Ihe nkpuru kernel na-acha odo odo na odo odo dị iche iche nke pistachio sitere na lutein na anthocyanin. N'etiti mkpụrụ, pistachios nwere ọkwa kachasị elu nke potassium, γ-tocopherol, vitamin K, phytosterols, na xanthophyll carotenoids.